‘सानो मन’ प्रचार काइदा, शीर्ष गीत गाउने भिडियोको फाइदा ! - MD Media Nepal
‘सानो मन’ प्रचार काइदा, शीर्ष गीत गाउने भिडियोको फाइदा !
540 पटक हेरिएको
काठमाण्डौ। असार २७ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउन लागेको आयुष्मान देशराज जोशी र शिल्पा मास्के स्टारर चलचित्र ‘सानो मन’ टीमले प्रचार-प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । टीमले राजधानीदेखि मोफसलसम्म फिल्मको प्रचार भ्याइसकेको छ । म्यूजिकल लभस्टोरीमा निर्मित चलचित्रले बक्सअफिसमा राम्रो व्यापार गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
शिर्ष गीतमा रोहितजोन क्षेत्रीको स्वर तथा स्वप्निल शर्माको शब्द छ । सुयोग सोताङ्गले संगीत भरेका छन् । युट्युबमा यस गीतको भिडियोलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् । यो चलचित्रमा सक्षम सुवेदी, गौरी मल्ल, विशाल पहारी, शिशिर वाङदेल, रश्मी भट्ट, देव कुमार श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । सुयोग गुरुङ र मिलन श्रेष्ठले सम्पादन गरेका छन् ।